အီရန်နိုင်ငံက ခေတ်မီ ပြည်တွင်းဖြစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ စမ်းသပ်နေ - Xinhua News Agency
တီဟီရန်၊အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီရန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းSemnan ပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြုလုပ်သော လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်း ခေတ်မီ ပြည်တွင်းဖြစ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များကို ထည့်သွင်း စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာ IRNA က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) အပါအဝင်အီရန်နိုင်ငံစစ်တပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်္ဂါနေ့တွင် “နိုင်ငံ၏ဝေဟင်ပိုင်နက်အားခုခံကာကွယ်သူများ၏ လေ့ကျင့်မှု၁၄၀၀”ဟု အမည်ပေးထားသည့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ခဲ့ကြသည်။
IRGC မှ လေတပ်ဦးစီးချုပ် Amir Ali Hajuzadeh က “ လွန်ခဲ့တဲ့၁၅ နှစ်က မိမိတို့မှာ ဒီလိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး၊ နောက်ပြီး ရေဒါသုံးကိရိယာတွေ၊ စစ်ရေးနည်းပညာတွေ၊ မြေပြင်မှဝေဟစ်ပစ်ဒုံးကျည်စနစ်တွေအကုန်လုံးကို နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့ပေါ်မှာမှီခိုခဲ့ရပါတယ်”ဟုပြောသည်။
“လက်ရှိမှာတော့ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတွေမှာသုံးတဲ့ လက်နက်ကိရိယာတွေအကုန်လုံးကို အီရန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ” ဟု သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်တပ်သုံးလေယာဉ်များမှ ကြဲချနိုင်သည့် အဝေးထိန်းဗုံးစနစ်ကို အီရန်လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့က ပထမဆုံးအကြိမ် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး IRGC ၏ တာဝေးပစ်မှတ် အတိအကျဖမ်းယူနိုင်သည့်ရေဒါစနစ် ကိုလည်းစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း Hajizadeh ကဆိုသည်။
Qods ဟု အမည်ပေးထားသည့် ရေဒါစနစ်သည် အကွာအဝေး၅၀၀ ကီလိုမီတာကျော် နှင့် အမြင့်ပေပေါင်း ၉၀,၀၀၀ ထက်မှ ပစ်မှတ်များကို ခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း IRGC ၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် အွန်လိုင်းအချက်အလက်များမှသိရသည်။
Qods ရေဒါကို ယာဉ်တစ်စင်းတည်းပေါ်တွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အီရန်ပြည်တွင်းဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်ထားရာ မည်သည့် အီလက်ထရောနစ် စက်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းကို မဆိုဖြတ်ကျော် ထောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
Joshan နှင့် Khatam ဟုအမည်ပေးထားသည့် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နှစ်ခုကိုလည်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ပစ်မှတ်အနိမ့်များကိုအောင်မြင်စွာထိုးဖောက်ပစ်ခွင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း အီရန် Khatam al-Anbia လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်မှူး Ghader Rahimzadeh ကပြောကြားခဲ့သည်ဟု IRGC မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Joshan စနစ်သည် အီရန်နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Khordad 15 မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ခွင်းဒုံးကျည်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် စနစ်ဖြစ်ကြောင်း Rahimzadeh ကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစိုးရပိုင် Tasnim သတင်းဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၌ အမည်မသိ ရွေ့လျား တာလတ်ပစ်ဒုံးကျည်စနစ်သစ်ကို ဒေါင်လိုက်ကျည်ဖူး ၄ ခုတွဲဖြင့် ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုအမျိုးအမည်မသိစနစ်သည် ဒုံးခွင်းလောင်ချာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေဒါ၏ အထောက်အကူစနစ်တစ်ခုဖြစ်ဟန်တူပြီး ဒုတိယမြောက်ရေဒါသယ်ဆောင်ရေးယာဉ်တစ်ခုမလိုဘဲ သီးခြား လေကြောင်းပစ်ခွင်းမှုစနစ်လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း Tasnim က ဆိုသည်။
ယင်းအမျိုးအမည်မသိလောင်ချာစနစ်အား ပစ်ခတ်ရန် ဒုံးကျည် ၈ လုံးမှ ၁၂ လုံးအထိ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ရေတပ်သင်္ဘောများတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုယူဆရကြောင်း သတင်းထဲတွင်ပါရှိသည်။ (Xinhua)
TEHRAN, Oct. 13 (Xinhua) — Iran on Wednesday tested new domestically developed air defense equipment duringalarge-scale air defense drill in the northern province of Semnan, official news agency IRNA reported.
Units from the army as well as the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) started on Tuesday the joint exercise codenamed Defenders of the Velayat Skies 1400.
“Fifteen years ago, we did not have such capabilities, and we depended on foreign equipment in radar, command, and control as well as surface-to-air missile systems,” said Amir Ali Hajizadeh, aerospace commander of the IRGC.
“Now, all the equipment used in the yearly exercise has been developed in Iran,” he added.
Remote-controlled winged bombs fired from warplanes were launched for the first time by the Iranian armed forces, andanew IRGC long-range pulse radar system entered service, according to Hajizadeh.
The radar system, known as Qods, can detect targets atarange of more than 500 km and an altitude of more than 90,000 feet, according toareport on the IRGC’s official online outlet.
The Qods radar can be mounted and operated onasingle vehicle, works on domestically-developed software, and is designed to confront different electronic warfare tactics, the report said.
Two air defense systems called Joshan and Khatam were test-fired for the first time in the drill and successfully destroyed low-altitude targets simulating an infiltration, said Ghader Rahimzadeh, commander of Iran’s Khatam al-Anbia air defense base, as quoted by the IRGC’s official news site.
Joshan is an upgraded version of the Iranian Khordad 15 surface-to-air missile system unveiled in 2019, Rahimzadeh added.
Additionally, semi-official Tasnim news agency reported the use in the drill of an unknown new mobile medium-range missile system with quadruple vertical canisters.
The unknown system appeared to be equipped witharadar installed on the launcher, which would allow each launch system to act independently with no need forasecondary radar-carrying vehicle, Tasnim said.
Each battery of the unknown system is expected to be armed with eight to 12 missiles and is believed to have the ability to be mounted on naval vessels, it added. Enditem